Mawjada xatooyada qalabka sahanka - Geofumed
Qaadashada tuugada qalabka sahan
Sebtember, 2008 GPS / Qalabka, topografia
Hoosta hoos ku qoran
Jaaliyadaha qaaliga ah.
Laga soo bilaabo dhowr bilood ka hor illaa maanta, sahamiyeyaashu koox ahaan ayaa la silcaya dhacdooyinka guud ee xarumaha, heerarka iyo gps.
Laga soo bilaabo shaqadayda, shirkad u qaybisa alaabooyinka kuyaalka dhulka, dhif iyo naadir waa todobaad, inaanan garanayn wax khasaare ah oo ku jira boorsada shaqada, baabuurka ama xitaa shaqada dhexdeeda.
Guud ahaan dhacdooyinkan ayaa ka dhacaya Madrid iyo agagaarkeeda. Saaxiibo badan ayaa sheegaya in ay arkeen shakhsiyaadka qalabkeena u adeegsanaya maafiyada, ka dibna u qaadaan wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, laakiin waxba kama qaban karno.
Shirkaddayda, oo ah shirkad kireeya qalabka isgaadhsiinta, dhowaan dhismaha dhismaha, ayaa soo gaadhay tuugada GPS iyo laba xarumood oo sare oo sare ee magaca Leica.
Foomka tuugada, dhaca waqtiyada cuntada, taas oo ah "tuugo" caambaaraynaynaa Guddiga yimaadaan in ay ka shaqeeyaan iyo qabsado ah "sanduuqyada casaan ama jaalle ah" oo aad ka tagtaan oo aan kiciyo shaki kasta. Ma jeclaan lahaa in aan ka fikiro in mid ka mid ah kaaliyeyaasheena ama shaqaalaha shaqadu ay ogaadeen qiimaha qalabka ama ay sameeyeen in la dhayalsado dhacdada si ay u dhacdo.
Todobaadkii hore, sidoo kale waxaan u malaynayaa in ay tahay dhacdo hal mar, u dhow A42 ah, lagana qaatay, oo xadday GPS ku hagaajin lamaanahaaga sahmiyaha annagaa ah, iyaga samaynta jiifsan ay dhulka dhabarka, si ay u lahaa waqti aad ku baxsato.
Aniga, xitaa, inaan ka shaqeeyo shaqo, waxaan la ixtiraamay qalabkii aan adeegsanayay, iyada oo arrintani ay saldhig u tahay albaabka xiritaanka ee ah iyo aniga ilaa mitirka 20 oo la hadlaya qofka mas'uul ka ah shaqada.
Fikirkayga anigoo sahmiyaha a, Anigu waxaan ahay cad uga welwelsan tahay xaaladda iyo la gaarey heer iyo haddii qof adiga ama qof aad ogaa isticmaali kartaa qaar ka mid cadaadis on booliska, siyaasiyiinta iyo ciidamada warbaahinta news lagu soo dhaweyn doono. Qaybteyda, waxaan heli lahaa wada-shaqeeynta oo dhan, si cad.
erayadan oo dhan ka dib, waxaan kuu soo bixin talooyin (reversionados gole post Cartesia) iyo sida loo xalin lahaa this, dad badan oo naga mid ah waxay yeelan doonaan in ay joojiyaan shaqada, maxaa yeelay, ma aad qaadi karto tuugada ah ee qalab aad. Haa, haddii aad computer waxaa caymiska, caymiska, laakiin waxa ay qaadataa dhowr maalmood si ay u ururiyaan oo dhan qiimaha wax aan ku amray oo dhan ugu xumaa ee maalmood laga badiyay xalinta arrimaha maamul oo dhan. Haddii qalabka kirada loo kireeyo guriga, waxay u baahan doontaa xayeysiiska, taas oo noqon karta 20%, qiimaha iibka hadda ee qalabka.
-Ka kala tagsan heer ka sareeya heerka ama saldhigga guud, marwalba waa heegan. Haddii ay tahay inaad u guurto, inaad fuliso qaar ka mid ah maareynta, qiimee haddii aad kala tagto oo aad dib ugu soo noqoto ama aad raadsato qof aad daawato. Gaar ahaan khaas ahaan qaasatan meelaha gaarka ah, sida jidadka iyo waddooyinka.
- Haddii aad qaadato qalabka baabuurka, ha kala fogeyn isaga. Waqtiga raashinka haddii ay suurtagal tahay in gaariga la arki karo iyo haddii aan qalabka la qaadan makhaayadda ama bararka.
- Saar qalabka GPS, halkaas oo ay jiraan dad ka shaqeeya oo dalbana in ay isha ku hayaan.
Sidoo kale kaalinta in ay adag tahay in ay gaaraan meelaha la aragti liita waddooyinka iyo goobaha la gaadiidka yar, ama sirqoollada deriska deyr leh, wax weyddiinaya haddii ay daryeelaan oo ay halkaas laga tegi saacado yar (sida caadiga ah ma gelin dhibaato). Hal xal ayaa ah in la qaato gaariga, qalabka oo dhan ku rido, marka laga reebo raadiyaha raadiyaha iyo GP-yada, iyo taleefanka gacanta oo habka saxda ah u sameeyaan moobilka.
- Haddii ay suurtagal tahay, gps, waxay la shaqeeyaan saldhigyo tixraac ah, sidaa darteed ma isticmaali karno gps-ga go'an.
- Qiyaas kasta oo kale oo maskaxda ku haya.
Marka la eego xaaladda, waxay u egtahay in aynu nahay qofkii isxilqaamay ee muhiim u ah, laakiin waa habkeena nolosha iyo haddii aan ka maqnayn, iyo in badan oo ka mid ah waqtiyadan dhibaatooyinka, ma garanayno waxa aan ka tagnay.
Waxaa laga yaabaa in emailkani aanu la xiriirin shaqadaada, laakiin haddii ay la xiriirto, ama aad taqaan qof kale, fadlan, PASALO.
Markaad ixtiraameyso, salaan.
Agaasimaha Farsamada iyo Ganacsiga
Post Previous«Previous Law of Territorial Territorial Guatemala, V4
Post Next Xaggee ayaad i soo booqanaysaa?Next »
2 Jawaab ah "Qulqulka xadida qalabka sahan"
Ilaalinta xatooyada tuubbada koodhka PIN ee daruurta waxaa keenay qalab casri ah sida ay u shaqeyso. . Ma nabad baa? Sida nidaamkani u shaqeeyo. Salaan
anti-xatooyada isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan dooranay inaan u adeegsano dadka qaata kaliya sida qalabka beeraha ee ku xiran VRSNow ee Madrid, waxaan mar hore ka daalnaa dhibaatooyin badan oo caymis ah ...